Akadzika murume chidhakwa demo | Kwayedza
Akadzika murume chidhakwa demo
10 Sep, 2020 - 10:09	 2020-09-10T10:43:11+00:00 2020-09-10T10:43:11+00:00 0 Views
MUDZIMAI wekuCentenary, kudunhu reMashonaland Central, akasungwa nemapurisa eko nemhosva yekutema-tema murume wake nedemo ndokumukuvadza zvakaipisisa achimupomera kuswera achiraradza nekunwa kachasu izvo zvaiita kuti atadze kuenda kubasa kunoshandira mhuri.
Mutauriri wemapurisa kudunhu iri, Inspector Milton Mundembe, vanotsinhira nyaya iyi vachiti mapurisa ari mubishi kusunga vanhu vanobika doro risingabvumidzwe nemutemo vachiritengesa.
“Mudunhu reMashonaland Central tine dambudziko rekuti apo vanhu vagere kudzimba, kune vave kubika doro rinosanganisira kachasu vachitengesa. Izvozvi tine nyaya yekurwisana kwemudzimai nemurume wake kupurazi reArchford, kuCentenary. Mudzimai wacho ari kupomerwa kurova murume wake zvakadarikidza nekuda kwekuti aigara akadhakwa nekachashu achitadza kushandira mhuri kubasa papurazi iri,” vanodaro Insp Mundembe.
Vanoti mapurisa akasunga Judith Antonio (45) kuburikidza nemhosva yaanonzi akapara nemusi wa27 Nyamavhuvhu apo akazvambaradza murume wake Ruwaze Tinashe (36) achimupomera kuti akanga asisaende kubasa kunze kwekugara akararadza nedoro rekachasu.
“Tinashe anonzi ange ongorovha kubasa nekugara akararadza nedoro rekachasu. Nemusi uyu, mudzimai uyu nemurume vaiva muimba yekubikira apo mukadzi akabvunza kuti aida kuti vafe nenzara here nemhuri nekugara asingaende kubasa ndokubva vatanga kurwisana,” vanodaro Insp Mundembe.
Mudzimai uyu anonzi nehasha, akazotora demo raiva mumba umu ndokutema murume wake kunzeve yekurudyi uyewo nepagumbo rekuruboshwe.
Nzvimbo dzose dzakatemwa idzi dzinonzi dzakadziuka maronda makuru ndokutanga kudhubhuka ropa rakawanda.
Murume uyu anonzi akatanga kuchema zvikazoita kuti muvakidzani wemhuri iyi, Miya Solomon (38), amhanye kunomununura.
Tinashe akazoendeswa nevavakidzani kuchipatara cheCentenary uko anonzi upenyu hwake huri pakanyangara.
“Tinoshoropodza vanobika kachasu uyewo nekukurudzira kuti vanhu vasarwisane mudzimba,” vanodaro Insp Mundembe.
Masangano anomirira kodzero dzevanhurume nevanhukadzi anoti nyaya dzemhirizhonga dzemudzimba dziri kuwanda, kunyanya panguva ino apo veruzhinji vagere kudzimba sedanho rekurwisa chirwere cheCovid-19.